Uhlalutyo lwe-YouTube lulapha | Martech Zone
Lwesine, Disemba 1, 2011 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 22, 2017 Douglas Karr
Ukuba awukangeni okwangoku, I-YouTube ihlaziye ukuqonda kwayo iphakheji entsha, epheleleyo kubahlalutyi Ipakethe.
Nazi ezinye zeempawu zamva nje ze- Uhlalutyo lweYouTube:
Iphepha elihle lokujonga ngokubanzi.
Ingxelo enzulu ebandakanya ukubalwa kwezibalo njengoko kulinganiswa ngokuthandwa, ukungathandwa, amagqabantshintshi kunye nezinto ozithandayo ezongeziweyo okanye ezisusiweyo.
Iividiyo eziphezulu eziqhuba ezona mbono kunye nemirhumo.
Ingxelo entsha yokugcinwa kwabaphulaphuli ebonisa ukuba zide kangakanani iividiyo ababukeli bakho ukuba zihlale.
I-YouTube ikhuphe oku Uhlalutyo lwe-infographic ye-YouTube nenkcazo yotshintsho:
Apha eMartech, silubonile ukwanda okuphawulekayo kwitrafikhi ukuya kwiividiyo zethu kunye nokugcwala kwiividiyo zethu ukubuyela kwindawo yethu. Kungenxa yoko le nto siphuhlise Ibar esecaleni yewindows kwaye thina Lungiselela iividiyo zethu ze-YouTube kukhangelo.
Ngapha koko, sibona ukubambeka kakhulu kwividiyo ukuze sikwazi ukwandisa imveliso yethu kwiividiyo zeveki apha kungekudala kunye nomxhasi osemthethweni wevidiyo! Umcimbi wethu ngeevidiyo kukuba bambalwa kakhulu kwaye bakude kakhulu kwaye ayingqinelani. Sijonge phambili ekuphuhliseni iividiyo ezininzi ezinomxholo omkhulu rhoqo. Siza kukugcina ngeposi.
Olu lutsha kubahlalutyi Iphakheji izokunceda ukubethelela umxholo oqhuba eyona nto ibalulekileyo kubafundi bethu!
tags: UhlalutyoIiVidiyo zeNtengisouhlalutyo lwevidiyoyoutubeUhlalutyo lwe-youtubeUhlalutyo lwevidiyo ye-youtube